Jijiga: Liyuu Booliska oo Qabsaday 7 Degmo Dalka Somaliya, Kuna Wajahan Kuwa Kale! – Rasaasa News
Jijiga: Liyuu Booliska oo Qabsaday 7 Degmo Dalka Somaliya, Kuna Wajahan Kuwa Kale!
Jun 4, 2014 7 Degmo, Booliska, degaanka, Jijiga, Liyuu, oo, Qabsaday, somalida
Jijiga, June 4, 2014 – Dagaalo xoogan oo maalmahan ka socday gabalka Bakool ee dalka Somaliya ayey maleeshiyada Liyuu Booliska Atoobiya ku qabsadeen todobo, (7) degmo oo ka tirsan dalka Somaliya.
Dagaalku wuxuu dhexmaray maleeshiyada Liyuu Booliiska Atoobiya, ciidamada Somaliya iyo AMISOM oo dhinac ah iyo Shabaabka Somaliya oo dhinac ah. Waxaana dagaalkan ku dhintay ugu yaraan 87 ruux oo ka kala tirsan dhinacyada dagaalamay iyo waliba dad shacab ah.
Dagaalka wuxuu ka dhacay degaan balaadhan oo ay ka mid yihiin; tuulooyinka Aato, Rab-dhuure, Biyabaxo iyo Lagalaay oo kuligood ka tirsan gabalka Bakool.
Gudoomiyaha gabalka Bakool ee dalka Somaliya, Maxamed Cabdi Tool, oo u waramay VOA-Somali, ayaa sheegay in dagaalka ay ka qayb galeen ciidamo ONLF ah, oo ka gudbayey xadka.
Gudoomiyaha gabalka oo mar kale u waramay Ideecad ka mid ah kuwa Muqdisho, ayaa sheegay in ciidamada Liyuu Boolisku ay rasmi u joogaan gabalka, tababarna siiyaan ciidamada dawlada Somaliya ee gabalka Bakool.
Dhinaca kale, wararka laga helayo Ismaamulka Somalida Itoobiya, ayaa sheegay in ciidamada Liyuu Boolisku ay qabsadeen todoba tuulo oo ay ka mid yihiin; Sariir, Lahelow, Shimbiraale, Rahle, Lagalaay iyo Aato.
Waxaa kale oo ismaamulku sheegay in ciidamadoodu ay ku wajahan yihiin qabashada magaalooyinka Garswayne, Waajid, Xudur iyo Rab-dhuure.
Tuulooyinka ay qabsadeen maleeshiyada Liyuu Boolisku, waxay ka taageen Calanka Ismaamulka iyo midka Atoobiya, inkasta oo markii dambe ay saraakiisha ciidamada federalka Atoobiya u sheegeen in ay saaraan Calanka Somaliya, sidaasna waxaa sheegay dadka shacabka ee ku nool degaanada ay qabsatay Atoobiya.
Dadka Somalida, ayaa horayba uga walaacsanaa joogitaanka ciidamada Atoobiya dalka Somaliya, waxaadse moodaa in ay soo kordhay dhibaato hore leh oo ay Atoobiya ku qabasnayso dalka Somaliya maleeshiyada Liyuu Booliska oo wata magaca Somali ah.
Shaki kuma jiro in maleeshiyada Liyuu Booliska Atoobiya, ayna dib uga laabanayn magaalooyinka ay qabsadeen oo ay degan yihiin dad la hayb ah.
Maleeshiyada Liyuu Booliska, oo dhibaatooyin xun xun ku haya Shacabka Somalida Ogadeeniya ee ay Atoobiya gumaysato, ayaa hada dhibaatadii u gudbiyey shacabka Somalida ee ku nool Jamhuuriyada Somaliya.
Addis Ababa oo Qaraxyo lagu fashiliyey!
Dhaawac la Keenay Addis Ababa